June 2021 - Page 8 of 15 - Cele Fans
June 9, 2021 Cele Fans 0
တံတာအမည်တစ်ခုပြောင်းနိူင်ခဲ့သည့် အာဏသိမ်းစစ်ခေါင်းမှ ၄လကျော်မှာတိုင်းပြည်တိုးတတ်ပြောင်းလဲလာကြောင်း ပြော အာဏာသိမ်း ၄ လကျော်ကာလအတွင်း တိုင်းပြည်တိုးတက်ပြောင်းလဲလာကြောင်းနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အသစ်ပြန်လည်ပြင်ဆင် သတ်မှတ်မယ်လို့ စစ်ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဇွန်လ ၇ ရက်က ပြုလုပ်တဲ့ စစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာ ပြောပါတယ်။ မိမိတို့အနေနဲ့ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တာဝန်အရပ်ရပ်အား တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်မှုဟာ ၄ လကျော်ကာလအထိ ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေ ရှိသကဲ့သို့ စိန်ခေါ်မှု တချို့လည်းရှိနေသေးတယ်၊ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်းမွန်ပြည်နယ်နဲ့ ကရင်ပြည်နယ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး […]
ရဟန္တာ ဆိုပြီးလူပြောများတဲ့ သာမညဆရာတော်ကြီးက အမေလာတော့တောင်အောက်ဆင်းကြိုတယ် “ဒကာမ လေး သင်ဟာ သင်အဖေထက်အသက်၃ဆရှည်မယ် အသက်ရှည်သည်နှင့်အမျှဘုန်းတန်ခိုးကြီးမယ်တဲ့” အဲ့လိုမိန့်တယ် ခင်ညွှန့်‌တိုကြားတော့ သွားပြီ “ဘယ်သူမင်းဖြစ်မလဲလျှောက်တယ်” ရေဖလားကော်ပြီးငုံကြည့်ခိုင်တယ် ဖလားထဲအမေ့ပုံပေါ်လာတယ်နော် ရှူးရှူးရှဲရှဲနဲ့ထပြန်သွားတယ် ဆရာတော်ရုပ်အလောင်းအခိုးခံရတယ် ခင်ညွှန့်လက်ချက်ပေါ့ ရဟန္တာသားဆိုပြီးစားကြလားမသိ ငရဲအိုးဂျိုးကပ်မဲ့ဟာတွေ ဘုရားတရားဗန်းပြလည်းလုပ်မနေပါနဲ့ သေငရဲသွားကြမှာပါအတုအယောင်တွေ သူတိုကပ်တဲ့ဟာတွေ ခွစားပြီး မိုက်မိုက်ရိုင်းတွေဟောနေတဲ့လူပျက်တွေရှိသေးတယ် ရဟႏၲာ ဆိုၿပီးလူေျပာမ်ားတဲ့ သာမညဆရာေတာ္ႀကီးက အေမလာေတာ့ေတာင္ေအာက္ဆင္းႀကိဳတယ္ “ဒကာမ ေလး သင္ဟာ သင္အေဖထက္အသက္၃ဆရွည္မယ္ […]
တရုတ်က မအလကို တကယ်ကူမှာလား . . . သတင်း နှစ်မျိုးတွေ.ရ
တရုတ်က မအလကို တကယ်ကူမှာလား အခု သတင်း နှစ်မျိုးတွေ.ရတယ်။ တရုတ်က အမေရိကန်ကို အံ့တုပြီး မအလကို ပိုကူမယ်ပြောတယ်ဆိုပြီး အောက်ကလင်ခ်မှာ ရေးထားတယ်။ ကျနော်က MRTV မကြည့်ရတော့ မသိဘူး။ အောက်ကလင့်ခ်ကတော့ MRTV က ပြောသလို ရေးထားတယ်။ ကြည့်မိသူများ ပြောပြပေးပါ။ https://www. bloomberg. com/…/china-boosts-support-for… နောက်သတင်းကတော့ ယူကေမှာရှိတဲ့ တရုတ်သံရုံးက တရားဝင်ကြေငြာတဲ့စာပဲ။ အောက်လင့်ခ်မှာပါတယ်။ မအလကို ပိုကူညီမယ်ဆိုတာ တစ်ခုမှ […]